Mgbanwe Dijitalụ bụ Okwu Ọchịchị, Ọ bụghị Okwu Teknụzụ | Martech Zone
Tuesday, October 16, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ruo ihe karịrị afọ iri, uche m na-agba izu na ụlọ ọrụ anyị enyerela aka azụmaahịa gbanwee ma gbanwee ụlọ ọrụ ha na ntanetị. Ọ bụ ezie na a na-echekarị nke a dị ka ụdị ntinye isi site na ndị na-etinye ego, ndị isi, ma ọ bụ Chief Executive Officer, o nwere ike iju gị anya ịchọpụta na ndị isi ụlọ ọrụ enweghị ahụmịhe na nka ịkwanye mgbanwe dijitalụ. A na-akwụkarị m ọrụ site na ndị isi iji nyere ụlọ ọrụ aka ịgbanwe - ma ọ ga - amalite site na ahịa na ohere ịre ahịa n'ihi na ọ bụ ebe a ga - enweta nsonaazụ dị egwu ngwa ngwa.
Dika mbelata nke uzo di iche-iche na-aga n’ihu na onu ogugu nke usoro mgbasa ozi dijitalụ di elu ebiliwo, ulo oru na acho ime mgbanwe a. Echiche ọgụgụ isi na usoro ihe nketa jupụtara ebe niile, yana enweghị nyocha na ntụzịaka. Site na iji usoro agile, enwere m ike iweta ndị isi na dijitalụ ha ntozu ahia n'ime ụlọ ọrụ ha, n'etiti ndị asọmpi ha, yana ịkwanyere ndị ahịa ha ugwu. Ihe akaebe ahụ na-eme ka o doo anya na anyị kwesịrị ịgbanwe azụmahịa ahụ. Ozugbo anyị zụrụ azụ, anyị na-aga njem iji gbanwee azụmahịa ha.
M na-anọgide na anya na ndị ọrụ dị njikere ịmụta na-ana… ma ọ bụ mgbe management na-edu ndú na-na ọkụkụ ndị etịbede. Ọbụna mgbe ha ghọtara na ụzọ ọzọ maka mgbanwe dijitalụ na Agility mkpochapu, ha na-agbanye azụ n'ihi ụjọ mgbanwe.
Mkparịta ụka na-adịghị mma n’elu na enweghị mgbanwe nke ndu bụ nnukwu nsogbu ndị na-egbochi ọganiihu ịgbanwe.
Dị ka ihe omumu ohuru site na Nintex, mgbanwe dijitalụ abụghị nsogbu teknụzụ dịka ọ bụ esemokwu talent. Ọ bụ ya mere ndị ọkachamara dịka mụ onwe m ji achọ nnukwu ugbu a. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ nwere onyinye dị ịtụnanya n'ime, a naghị ekpughe talent ahụ na usoro ọhụụ, nyiwe, mgbasa ozi na usoro. Static Filiks mgbe dozie ke n'ígwé nke management huu ya kwụsie ike… nke nwere ike ịbụ nke ọma na-egbochi ihe dị mkpa n'ezie.
naanị 47% nke ndị ọrụ azụmahịa na-amata ihe mgbanwe dijitalụ bụ - hapụ ma ụlọ ọrụ ha
nwere atumatu iji lebara anya / nweta ngbanwe dijital.
67% nke ndị njikwa mara ihe mgbanwe dijitalụ jiri tụnyere naanị 27% nke ndị na-abụghị ndị njikwa.
N'agbanyeghị 89% nke ndị na-eme mkpebi na-ekwu na ha nwere ndu mgbanwe ahọpụtara, ọ nweghị onye pụtara dịka onye ndu doro anya gafee ụlọ ọrụ.
Ihe dị mkpa na ọdịiche ịmara bụ usoro IT nke ndị ọrụ azụmaahịa, 89% onye maara ihe mgbanwe dijitalụ bụ.
Na mkparịta ụka anyị na ndị isi IT na anyị Dell Luminaries pọdkastị, anyị na-ahụ ihe dị iche n'ọchịchị siri ike na-eme ka nzukọ dị iche iche. Organizationstù ndị a anaghị edozi nsogbu ọ bụla. Omenala ọrụ nke ndị otu a - ọtụtụ n'ime ha ụlọ ọrụ mba ụwa nwere ọtụtụ iri puku ndị ọrụ - bụ na mgbanwe na-aga n'ihu bụ ụkpụrụ.
Ọmụmụ ihe ọmụmụ Nintex na-akwado nke a. Kpọmkwem na nzukọ ahịa, ọmụmụ ihe ahụ na-ekpughe:
60% nke uru ahịa amaghị ihe mgbanwe dijitalụ bụ ọbụna
40% nke ndị ahịa ahịa kwenyere na ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ ise nke ọrụ ha nwere ike akpaghị aka
74% kwenyere na akụkụ ụfọdụ nke ọrụ ha nwere ike akpaghị aka.
Ndị otu ha na-arụ ọrụ maka enweghị nduzi na otu esi enwe mgbanwe site na itinye n'ọrụ ọgụgụ isi na akpaaka iji dozie ọdịiche ahụ. N'ụzọ dị mwute, ọmụmụ ihe ahụ na-ekpughekwa na 17% nke uru ahịa anaghị etinye aka na mkparịta ụka mgbanwe dijitalụ na 12% nwere oke itinye aka.
Mgbanwe Dijitalụ abụghịzi ihe egwu
Mgbanwe dijitalụ nke oge a abụghị nke dị egwu ma e jiri ya tụnyere afọ iri gara aga. Ebe omume dijitalụ nke ndị na-ere ahịa na-aghọwanye nke a pụrụ ịkọwapụta na ọnụọgụ nke nyiwe dị ọnụ ala na-agbasawanye, ụlọ ọrụ anaghị eme nnukwu ego itinye ego ha nwere na-eme naanị afọ ole na ole.
Ihe atụ bụ ụlọ ọrụ m na-enyere aka na ntinye aka dijitalụ. Otu onye na-ere ahịa jiri nnabata dị ukwuu batara nke ga-ewe ọtụtụ ọnwa iji weghachite, ma ọ bụrụ na ha nwere ike. Ọ chọrọ sistemu nwegasịrị nke onye na-ere ma nwekwaa, na-achọ ndenye aha ha na ntanetị ma zụta akụrụngwa ha. Companylọ ọrụ ahụ kpọtụrụ m ma rịọ m maka enyemaka ka m wee banye na netwọkụ m.
Onye otu m tụụrụ m aro, achọtara m ihe ngwọta jiri AppleTVs na HDTVs gbakwunye na shelf ma gbasaa ngwa ahịa nke na-efu naanị $ 14 / mo kwa ihuenyo - Kitcast. Site na ịghara itinye nnukwu ego itinye ego na itinye ego na ntanetị, ụlọ ọrụ ahụ ga-eweghachi ụgwọ ahụ ọfụma ozugbo usoro ahụ dị ndụ. Ma nke ahụ gụnyere ụgwọ ụgwọ m!
Na nyochaa okwu nke Odida nke Sears na nso nso aEchere m na nke a bụ ihe mere n'ezie. Onye ọ bụla nọ n'ime ya ghọtara na ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ịgbanwe, mana ha enweghị ndị isi iji mee ya. Kwụsi ike na ọnọdụ-ọnọdụ abanyela n'ime ọtụtụ iri afọ na njikwa etiti na-atụ egwu mgbanwe. Fearjọ ahụ na enweghị ike imeghari mere ka ha daa.
Mgbanwe Dijitalụ Na-atụ Ndị Na-arụ Ọrụ Anya Na-atụghị Anya
Ihe kpatara akara nke ndị ọrụ azụmaahịa anaghị enweta ederede banyere mbọ mgbanwe - ma nwee egwu na-enweghị isi n'ihi ya - bụ na enwere enweghị onye ndu doro anya n'azụ mgbalị mgbanwe. Nintex chọtara enweghi nkwekọrịta banyere onye kwesịrị iduzi mgbalị mgbanwe mgbanwe dijitalụ n'ime nzukọ.
N'ihi enweghị mmata ha, ndị ọrụ azụmaahịa nwere ike ịlele mgbanwe ụlọ ọrụ ha na mbọ akpaaka dịka na-etinye ihe ize ndụ ọrụ ha, ọ bụ ezie na nke a abụghị ikpe. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrụ na-eche na ojiji nke ikike ọgụgụ isi ga-etinye ọrụ ha n'ihe egwu. N'agbanyeghị nke ahụ, imirikiti ọrụ agaghị apụ n'ihi nsonaazụ usoro ọgụgụ isi.
N'ime ngalaba ahịa na azụmaahịa mụ na ha na-arụkọ ọrụ, ụlọ ọrụ emeworị kpụrụ akụ ha na opekempe. Site na itinye ego na mgbanwe dijitalụ, enweghi nsogbu nke mkpochapụ, enwere ohere iji talent gị rụọ ọrụ nke ọma. Legbasapụta ihe okike na ọgụgụ isi nke ndị ahịa gị na ndị ahịa gị n'ikpeazụ bụ uru kachasị elu nke mgbanwe dijitalụ!
Download Ọnọdụ nke ọgụgụ isi Usoro akpaaka ọmụmụ
Tags: mgbanwe ntanetịdownloadakụrụngwa ahịanintexpdfusoro akpaaka ọmụmụakụkọakpaaka ahịamgbanwe ahịa